Monday July 27, 2020 - 17:44:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dhulka NFD ee dowladda Kenya ay ula baxday gobolka waqooyi Bari ayaa sheegaya in ay ka dhaceen tacadiyo hor leh oo ka dhan ah shacabka gumeysiga ku jira.
Ciidamada Booliska Kenya ayaa toogasho ku dilay laba qof Soomaali ah xilli ay ku sugnaayeen magaalada Gaarisa, dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Kenyaatiga ah ay si bareer ah udileen shacabka xilli ay dibad baxyo socdeen.
Weerarkan oo ka dhacay suuqa xoolaha Gaarisa ayaa sare usii qaaday dibad baxyo ka dhan ahaa dowladda Kenya oo maalmahaan ka socday magaalada, saraakiisha booliska Kenya ayaa shacabka ay dileen ku sifeeyay burcad ay doon doonayeen laamaha ammaanka.
Waxgaradka magaalada Gaarisa ayaa arrintan cambaareeyay waxayna guddoomiyaha gobolka ugu baaqeen in uu arrinta soo farageliyo, ciidamada booliska Kenya ayaa cidda ay rabaan ku dila Gaarisa iyadoona maamulka maqaar saarka ah ee halkaas ka jira uusan waxba ka qaban karin.
Dowladda Kenya ayaa cuuryaamin dhaqaale ku haysa suuqyada ganacsiga waaweyn ee Gaarisa oo uu ugu horreeyo suuqa Xoolaha oo ah meel lagu kala iibsado dhaqaalaha ugu badan oo ay leeyihiin shacabka NFD.